Rabeharinirina Manjato Lalasoa, kandida ao Andoharanofotsy |
Vehivavy tokana no kandida ho ben’ny tanana ao Andoharanofotsy, kaominina ambanivohitra 10 kilometatra miala an’Anatananarivo amin’ny lalana RN7 mianatsimo raha ho any Antsirabe iny. Ny manentana azy hirotsaka hiatrika ny safidim-bahoaka.
Isan’ny kandida ho ben’ny tanana ao Andoharanofotsy ianao. Kandida kisendrasendra ve sa fanapahan-kevitra matotra ?
Eny isan’ny kandida mirotsaka ho fidina ben’ny tanana eto Andoharanofotsy ny tenako Rabeharinirina Manjato Lalasoa. Renim-pianakaviana. Manjato no fiantson’ny olona ahy fa indrindra eo amin’ny tontolon’ny zava-kanto.
Kandida kisendrasendra ve ? Efa tany amin’ny faha-15 taonako no nazava tamiko ny faniriana ho ben’ny tanana. Ary novolavolaiko ny tenako hahatanteraka an’izany.
Ho ahy mifandray amin’ny fanjakana izany fitantanana ny tanana izany. Mpiasam-panjakana aho. Mazava araka izany fa mahafantatra ny fiainan’ny mpiasam-panjakana aho ary koa ny momba izany fanjakana izany, izay no voalohany. Ny faharoa dia misahana ny sosialy ny anjara asan’ny ben’ny tanana. Efa nisehatra tao anatina fikambanana aho ary nananganana Ny TEAM Mizara Hazavana, fikambanana misehatra amin’ny sosialy. Ny fahatelo dia mandala ny fanabeazana ny tenako, mpampianatra zava-kanto aho.
Raha ny fampianarana norantoviko kosa dia nianatra ny leadersehip aho, momba ny communication interpersonnelle ary koa ny fifandraisana aman’olona. Efa niofana momba ny fananganana tetikasa na montage de projet ny tenako.
Entiko hamaranana azy dia ho ahy ny feon’ny vahoaka dia feon’Andriamanitra.
Raha izay no tanisainao izay dia lalam-piainana sahaza ho an’olona mitady asa. Ny ben’ny tanana anefa dia tontolo politika. Ahoana kosa momba ny lalam-piainanao raha politika noresahana satria ny fifidianana dia resaka politika ?
Politika tokoa ny fifidianana. Maro ny sehatra efa nolalovako ary nahazoako traikefa raha resaka politika no ijerena azy. Santionany, tao anatin’ny Vondrona Miralenta ho an’ny fampandrosoana ny tenako ary tao anatin’ny Conseil Régional Analamanga ho an’ny tanora aho.
Raha teo amin’ny fifaneraserana tamin’ny antoko dia tafaraka niasa tamin’ny antoko AME ny tenako tahaka izany koa tamin’ny antoko MDM. Fa azoko lazaina fa isan’ny namolavola ahy ny fifandraisana tamin’ny antoko AKFM Fanavaozana. Tsy midika fa tia mifindrafindra antoko aho akory. Cadrage no andraisako ny firotsahako tamin’ireny.
Isan’ny azoko tao anatin’izany ny fampiofanana ao koa ny traikefa tamin’ny fandraisana anjara amin’ny fampielezan-kevitra ohatra.
Efa nifanerasera tamina antoko politika ianao. Nahoana no tsy iray tamin’ireo antoko ireo fa nirotsaka tsy miankina ?
Isaorako tokoa ireo mpiandraikitra ny antoko voatanisa teo. Mbola misy amin’ireo mpiandraikitra no mifanerasera amiko. Fa ny tenako efa niomana ary izany no isan’ny nananganana ny pleteforme sy nifamolavolana niaraka tamin’ny tanora mavitrika. Ary tsy miankina izahay miaina ny teny filamatra manao hoe tsy tohanan’antoko fa nobeazin’antoko. Tiako handresy lahatra ny mpifidy aho fa tsy ny antoko no hifidianan’ny mpifidy ahy.
Efa nandray anjara tamina fifidianana ve ianao tany aloha tany ?
Sambany aho no mirotsaka miatrika safidim-bahoaka.
Eto amin’ny fiarahamonin-tsika dia mbola sahirana ny vehivavy rehefa fifidianana. Ahoana ny fahitanao na iainanao izany sakana izany sady ianao irery no kandida vehivavy eto ?
Ny mahavehivavy aloha tsy raisiko sakana ho ahy velively. Efa nambarako teo fa tao anatin’ny vondrona miralenta aho. Ary izay koa no nahatonga ny safidy hanendry lehilahy ny mpitarika ny lisitry ny mpanolotsaina.
Tsy féministe akory aho ;
Soritako fa raha eo amin’ny fiainana andavanandro dia ny vehivavy no mahalala bebe kokoa ny any anaty vilany ary ny mpitantana ny kaominina no mahalala bebe kokoa ny olan’ny vahoaka, tena sahaza ny vehivavy ny toeran’ny ben’ny tanana.
Na dia mbola tsy fampielezan-kevitra aza izao. Inona no vinan-kasa arosonao ?
Ny teny fanevanay dia « Koloinay fa tianay Andoharanofotsy »
Io no vy mampiaina anay. Tsy mandeha irery izahay. Tsy anay irery Andoharanofotsy.
Isan’ny laharam-pahamehana ho ahy ny sosialim-bahoaka, eo izany ny tontolon’ny fahasalamana, ny tontolon’ny fandriampahalemana, ny fanabeazana.
Fa ankoatra ny sosialy dia misy ny fihariana ka lohalaharana ireo tantsaha sy mpanao asa-tanana.
Ny fomba fiasanay dia misokatra amin’ny hery rehetra izahay. Afaka miara-miasa amin’ny daholobe midika fa afaka miara-miasa amin’ny fanjakana foibe.
Isan’ny toetsaina hitondranay ny fitantanana ny tanana dia hoe : « Madio tanana izahay miditra eo, madio tanana izahay mivoaka eo ». Tsy amidy vola Andoharanofotsy, tsy mivarotra an’Andoharanofotsy izahay.
Ianareo no isaorana tonga tety aminay.
Previous RAKONDRINA Fulgence kandida MMM ho ben’ny tanana ao Ranomafana
Next Olona tena tia fihavanana sy fiaraha-monina i Rina Randriamasinoro